Guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha Aqalak sare oo soo xiray shir ay lalahaayeen Wakiilo ka socday maamul goboleedyada. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha Aqalak sare oo soo xiray shir ay lalahaayeen...
Guddoomiyaha guddiga kheyraadka golaha Aqalak sare oo soo xiray shir ay lalahaayeen Wakiilo ka socday maamul goboleedyada.
kulankaan ayaa ahaa mid la-tashi ah waxaana Guddiga Kheyraadka Qaranka,Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Gaadiidka Golaha Aqalak Sare baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay la qaateen Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowlada Federaalka loogana tashanayay Hindise-sharciyeedka Batroolka.
Kulanka ayaa waxa uu soconayay mudo labada maalmood ah iyadoo qodobada Hindise-sharciyeedka Batroolka goobta laga aqriyay, lagana dooday.
Kulanka markuu soo gaba gaboobay ayaa warbaahinta la hadlay Xildhibaan Bile Cabdulle Cabdi oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland iyo Maxamed Xasan Geelle oo ka mid ah xildhibaanada Galmudug, waxa ay sheegeen in wax wanaagsan ay tahay wadatashiga una mahadcelinayaan guddiga Qeyraadka gollaha aqalka sare BFS.
Guddoomiyaha Guddiga Kheyraadka Qaranka ,Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Gaadiidka Golaha Aqalak Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sen, Ilyas Cali Xasan oo kulanka soo xiray ayaa sheegay in sharcigaan Batroolka uu yahay sharci la doonayo in ay ku dhaqmaan dadka Soomaaliyeed muhiimna ay tahay la tashiga dowlad goboleedyada maadaama uu aqalka sare matalo.
Kulankan latashiga ay Guddiga Kheyraadka Qaranka ,Kaabayaasha Dhaqaalaha iyo Gaadiidka Golaha Aqalak Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ay la yeelanayeen dowlad goboleedyada dalka ayaa waxa uu soconayay mudo laba maalmood.
Previous articleXuska 76 guuradii ciidanka booliska Soomaaliyeed oo Muqdisho laga xusay.
Next articleShirkii wasiirada maaliyadda oo Kismaayo lag usoo gaba gabeeyay